Ôksizenina - Wikipedia
Ny ôkzizenina (/oksi'zen:/ teny frantsay avy amin'ny fiteny grika ὀξύς oxys : asidra, ary -γενής -genēs mpamokatra) dia zavatra manana lahatra atômika 8 ary manana eva O. Ny lanjan'isam-bentin-kadiriny dia 1,429 kg/m3
Ny ôkzizenina dia 8%-n'ny lanjan'ny ranomasina, 46%-n'ny lanjan'ny hoditany, 23,1%-n'ny lanjan'ny rivotra (diôkzizenina, ôzôna).
Amin'ny hafanana sy tsindry antonony (25 °C, 1 Bar), etona diatômika ny fisehon'ny okzizenina, roanôkzizenina (dioxygène) ny anarany, manana raikipohy simika O2. Io no lazaina hoe ôkzizenina anatin'ny soson-drivotran'ny tany.
Ny ôzônina indray (telonokzizenina) dia etona metastabla misy any amin'ny haambo 40-50 km any ho any, ary tantavaniny ny ankoatra ny volomparasy tonga eto an-tany. Hatry ny taona 1970, mihamihakatra ny habetsan'ny ôzônina ety ambany noho ny fandotoan-drivotra. Vokatry ny hoton'ny ôksidan-azôty avy amin'ny solika amin'ny andro mafana ny ôzônina, azy lasa ôzônina ilay ôksidan-azôty rehefa misy ankoatra ny volomparasy. Ratsy ho an'ny fahasalamana sy mampiharafesina ny ôzônina.
Na dia roanôksizenina aza ny 21%-n'ny rivotra (amin'ny hadiry), 30%-n'ny rivotra ny lanjany tamin'ny taona karbônifera, noho ny fisian'ny alan-ampangabe teo amin'ny Pangaia.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ôksizenina&oldid=980336"
Dernière modification le 8 Febroary 2020, à 20:47
Voaova farany tamin'ny 8 Febroary 2020 amin'ny 20:47 ity pejy ity.